MACLUUMAADKA IYO EEYAHA EYDA SHIRANIYAANKA AH - EEYAHA
Macluumaadka iyo Eeyaha eyda Shiraniyaanka ah
Pomeranian / Shih Tzu eeyaha isku dhafan oo isku dhafan
Shiraniyaanka Emma ee 3 bilood (hoosta) walaasheed 'weyn' Sophia (sare) markay tahay 7 bilood jir— 'Sophia waxaa lagu arki karaa iyada oo ku ciyaareysa kubbadeeda teniska, kor. Iyadu waa eey sidan layaab leh u go'aansanay inaan ku darno qoyskeenna Shiraniyan kale, Emma. Shakhsiyadoodu waa kuwo aad u la yaab leh oo si gaar ah u kala duwan. Waad arki kartaa in muuqaallada Sophia ay u badan yihiin dhinaca Pom iyo Emma-na ay ka badan yihiin Shih-Tzu. In kasta oo ay Sophia ka weyn tahay labada, haddana Emma ayaa iyada dhaaftay iyada oo cabiraysa (Sophia waxa ay gaadhay meesha ugu sarreysa 4.5 rodol Emma waa ku dhowaad 6 waxaana la saadaalinayaa in ay ugu sarreyso 9). Waxaan si qurux badan u joojin karnaa telefishankayaga cable-ka labadan ayaa ah rabshado la daawanayo. '
Shih A Pom
Shiraniyaanku maahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Pomeranian iyo Shih Tzu . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
DBR = Diiwaanka Taranka Nakhshadeeye
DDKC = Naadiga Naqshadeeyaha Eeyaha Daanta
IDCR = Diiwaangeliyaha Kaydinta Cunnada ee Caalamiga ah®
Magacyo La Aqoonsan Yahay
Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka = Shiranian
Diiwaan Geliyaha Nakhshadeeye = Shiraniyan
Naadiga Naqshadeeyaha Eeyaha Kaynta = Shiraniyan
Diiwaan Geliyaha Cunnada Caalamiga ah®= Shiraaniyan
Gizmo Shiranian (Pom / Shih Tzu breed breed) da'da 1 sano
Gizmo Shiranian (Pom / Shih Tzu breed breed) eey yar at 12 toddobaad
Izzy the Shih Tzu / Pomeranian mix breed dog (Shiranian) at 7 bilood jir— 'Izzy waxaa iska lahaa caruurtay ayeeyooda u ahayd markii aabe yidhi' Eydu waa inay tagtaa 'markaa waxaan idhi waan qaadan doonaa. Iyadu waa eeyga ugu fiican ee aan abid haysto. Iyadu waa qof aad u caqli badan, wayna fududayd in la tababaro. Ma daadiso laakiin timaha ayaa soo baxa marka aan cadayanayo. Iyadu waa eey waardiye wanaagsan. Waxay jeceshahay inay la ciyaarto yarteyda reer Ruushka ee Siberia ah oo 1 bil ka weyn Izzy, bisadana culeyskeedu waa 2 rodol oo dheeri ah. Iyagu waa saaxiibbada ugu fiican oo iga qosliya. Marka aysan seexanayn, way ciyaarayaan. Iyagu waa kuwa ugu wada qurxan. Qof kasta oo qoyska ka mid ah ayaa jecel Izzy. Iyadu waa yar tahay oo tamar badan oo aad u jecel. Markasta dhunkasho ayey siisaa. Waan jeclahay xaqiiqda ah inaanan u kaxayn karin gabadha bilicsan bil kasta. Waxa kaliya ee ay u baahan tahay waa 15 daqiiqo oo maydhasho ah oo ay qalajiso Izzyna waa ay dhammaatay. Iyadu waa eeyga ugu fiican ee aan abid haysto.
Vausch the Pomeranian / Shih Tzu breed breed (Shiranian) eey
Rudy Shiranian (Pom / Shih Tzu mix ey ey) qiyaastii 6 bilood jir
sawirada dhaaniska weyn
Rudy Shiranian (Pom / Shih Tzu mix dog dog) eey yar oo ah qiyaastii 3 bilood jir
Ey Shiranian ah (Pomeranian / Shih Tzu mix ey ey), sawir qadarin leh Faded Rose Kennel
Ey Shiraniyan ah (Pomeranian / Shih Tzu breed breed), sawir qadarin leh Faded Rose Kennel
Lucy, eey Shiraniyaan ah oo jirta 9 toddobaad
Maximus Shiranian (Pom / Shih Tzu breed breed) markay jiraan 6 bilood jir kuna dhowaad 4 rodol— Wuxuu leeyahay shaqsiyad uu u dhinto, waana nin aad u madax banaan oo jecel in la jeclaado. Waxaan ku iibsan lahaa eey kale oo Shiran ah nanosecond haddii aan raadinayo. Wuxuu jecel yahay qof walba — dhallaanka, carruurta, ragga, haweenka, bisadaha, eeyaha kale ee waaweyn iyo kuwa yarba. Isagaa ka buuxa oo aad u caqli badan! Guri jabiddu waxay ahayd neecaw! In kasta oo uu yar yahay oo uu ku dhowaad isku garaaco markii uu lugta kor u qaado, haddana wuxuu jecel yahay inuu dibadda u baxo roob ama iftiin. Tan iyo markii aan joognay Wisconsin, xeerbeegtida wali way taagan tahay haddii barafku u weecin doono horumarkiisa guriga. '
Eeg tusaalooyin badan oo Shiraniyan ah
Sawirada Shiraniyanka 1
Liiska eeyaha ee loo yaqaan 'Pomeranian Mix Breed Dogs'
Liistada eeyaha Shih Tzu Mix
Eeyo yaryar iyo Dhexdhexaad iyo Ey waaweyn
Nehi Saint Bernard Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Macluumaadka Taranka Eeyaha Otterhound iyo Sawiro
Liiska Noocyada Ey Sled-yada
Liistada eeyaha isku dhafan ee 'Basenji Mix'
Macluumaadka Taranka Eeyaha ee Bulldog ee Faransiiska iyo Sawirro
Macluumaadka iyo Sawirrada Taranka Yar ee Shepherd Dog Australian
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Idaha ee Polish Tatra
Westiepoo Eyga Sawirada Taranka, 1
Macluumaadka Muuqaalka Eyga Feeryahan iyo Sawirro
isku qasan hound iyo madow
sida ay u weyntahay eyga 50 lb
isku darka poodle faransiiska leh chihuahua
imisa ayey ku kacaysaa eeyga c qaybta
waa maxay eeyaha bulmastiff
pictures of eeyaha cur buurta